लामो दुरीको सार्वजनिक यातायातमा यात्रु नभएपछि व्यवसायी समस्यामा:: Naya Nepal
लामो दुरीको सार्वजनिक यातायातमा यात्रु नभएपछि व्यवसायी समस्यामा
असोज १७, काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण झण्डै छ महीनाबन्द रहेको सार्वजनिक यातायात खुला भएपनि यात्रु नहुँदा यातायात व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण चैत १० गते देखि बन्द रहेको लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सरकारले असोज १ गतेदेखि खुला गर्ने निर्णय गरेपनि यात्रु नहुँदा व्यवसायी समस्यामा परेका हुन् ।
कोभिड–१९ संक्रमण हुनुभन्दा पहिले पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा प्रत्येक दिन ४५० ओटा सार्वजनिक सवारी साधन ओहोरदोहोर हुँदै आएपनि अहिले यात्रु नहुँदा दैनिक १५० ओटा सवारी साधन एक सिटमा एक यात्रु राखेर ओहोरदोहोर गर्न बाध्य छन् ।
काठमाडौंबाट पूर्वका ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, धनकुटा, सुनसरी, झापा, मोरङ, तेह्रथुम, उदयपुर, सिरहा र सप्तरी जाने ५४ ओटा बस कम्पनी मिलेर बनेको पूर्वाञ्चल यातायात व्यवसायी समन्वय प्रालिले यात्रु नभएकाले आलोपालो बस सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
प्रालिका सचिव रुद्रबहादुर कार्की सार्वजनिक यातायातमा राहतको प्याकेज नल्याउँदा व्यवसायीहरु मर्कामा परेको बताउँछन् । ‘बन्दाबन्दीका कारण छ महीना थन्किएर बसेका सवारी साधन मर्मत सम्भार गर्न लाखौं खर्च लागेपनि यात्रु नहुँदा समस्यामा परेका छौं’, उनले भने ।
सार्वजनिक यातायात खुलेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ताको लागि ताकेता गर्न थालेपछि व्यवसायी थप मर्कामा परेको उनको भनाइ थियो । मुलुकको राष्ट्रिय बसपार्कका रुपमा रहेको गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कबाट थोरै मात्रामा सवारी साधन बाहिरीने गरेका छन् ।
कोभिड–१९ को संक्रमण हुनुभन्दा पहिले प्रत्येक दिन ६०० देखि ७००को हाराहारीमा सार्वजनिक यातायात उपत्यका बाहिरीने गरेपनि अहिले प्रत्येक दिन २०० देखि २५० सार्वजनिक यातायात बाहिरीने गरेका छन् ।
नयाँ बसपार्क सञ्चालन गरेको ल्होत्से बहुउदेश्यीय प्रालिका महाप्रबन्धक सुनिल कुँवर नयाँ बसपार्कमा यात्रुको चाप कम हुँदै गएको बताउँछन् । ‘विगतका वर्षमा दशैंको एक महीनाअगाडि नै नयाँ बसपार्कमा भीड लाग्ने गरे पनि अहिले कोभिड–१९ का कारण यात्रुको चाप छैन’, उनले भने ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला आन्तरिक उडानमा क्षमता बराबर यात्रु बोक्न पाउने र सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत भाडा बढी लिएर यात्रु बोक्न पाउने गरी सरकारले गरेको विभेदकारी निर्णयका कारण सार्वजनिक यातायातमा यात्रु नभएको बताउँछन् ।
‘सार्वजनिक यातायातको भाडाभन्दा थोरै महंगो शुल्क तिरेपछि जहाजमा गन्तव्यस्थलसम्म जान पाउने भएपछि सार्वजनिक यातायातमा यात्रु को संख्या घटेकोे हो’, उनले भने । सरकारले सडकमा गुड्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई वेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीको असर पर्यटक बसमा समेत परेको छ । कोभिड–१९ का कारण विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणका लागि नआउँदा पर्यटक बस व्यवसाय पनि संकटमा परेको छ ।
टुरिष्ट बस एशोसियशन अफ नेपाल (टीवान) का महासचिव दिपेन्द्र अधिकारी कोभिड–१९ अगाडि प्रत्येक दिन १००को हाराहारीमा काठमाडौंदेखि पोखरा, चितवन, लुम्बिनी र जनकपुर पर्यटक बस चल्ने भए पनि अहिले मुस्किलले तीन/ चार ओटा बसमात्र चलेको बताउँछन् ।
‘कोभिड–१९ अगाडि दैनिक २/ ३ हजार स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक पर्यटकीय बसमा आवतजावत गर्ने गरेपनि अहिले जम्मा १०० जना यात्रु मुस्किलले आवतजावत गर्छन्’, उनी भन्छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तय गरेको स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार बस सञ्चालन गर्दासमेत यात्रु नभएको उनको भनाइ छ ।
सातामा नेप्से परिसूचक ९ दशमलव ७७ अंकले बढ्यो, कारोबार रकम भने ७३ करोडभन्दा बढीले घट्यो
असोज १७, काठमाडौं । यो साताको कारोबारमा नेप्से परिसूचक ९ दशमलव ७७ अंक बढेको छ । पाँच ओटा कारोबार दिनमा शुरुको दिन र अन्तिम दिन बढेको बजार १ हजार ५७१ दशमलव शून्य ४ विन्दुमा पुगेको हो ।
गत साताको अन्तिम कारोबार दिन बजार १ हजार ५६१ दशमलव २७ विन्दुमा थियो । यो साता पहिलो दिन ४ दशमलव २९ अंकले र अन्तिम दिन २० दशमलव ६१ अंकले बजार बढेको हो । सोमवारदेखि लगातार बुधवारसम्म घटेको बजार सोमवार ४ दशमलव ७३ अंक, मंगलवार ७ दशमलव २१ अंक र बुधवार ३ दशमलव १९ अंक घटेको थियो ।
कोरोना महामारी बढ्ने क्रम जारी रहे पनि देशभरको जनजीवन भने व्यवसायिक रुपमा सामान्य बन्दै गएको छ । देशमा लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण शेयर बजार र बैंक वित्तीय संस्था बाहेकका अन्य क्षेत्र भने ठप्प रहेको अवस्था थियो ।
त्यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कम व्याजदरमा सहज तरिकाले शेयर बजारमा लगानी भित्रिरहेको थियो । यो समयमा अन्य व्यवसायिक क्षेत्रका लगानी पनि भित्रिएको थियो ।
अवस्था सामान्य बन्दै जाँदा अन्य क्षेत्रका व्यवसायीले नाफा सुरक्षित गरी आफ्नो लगानी फिर्ता लग्ने क्रम जारी रहेकाले बजारमा केहि असर परेको जानकारहरुको भनाइ छ । यद्यपी यतिवेला बजार घट्ने समय नरहेको उनीहरुको बुझाइ छ । अहिले आफ्नो लगानीको प्रतिफल सुरक्षित गर्ने समय रहेकाले बजारमा माग बढी सिर्जना हुने हुदाँ बढ्ने सम्भावना रहेको लगानीकर्ताहरुकोनै विश्लेषण छ ।
यो साता परिसूचकसँगै सेन्सेटिभ इन्डेक्समा पनि न्यून अंकको बृद्धि देखिएको छ । ठूला कम्पनीहरुको मात्र कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स गत साताभन्दा यो साता शून्य दशमलव ५८ अंक माथि उक्लिएको छ ।
गत साताको अन्तिम कारोबार दिन असोज ८ गते बिहीवार ३०९ दशमलव ५७ विन्दुमा रहेको सेन्सेटिभ इन्डेक्स यो साताको अन्तिम कारोबार दिन असोज १५ गते बिहीवार ३१० दशमलव १५ विन्दुमा पुगेको हो ।
यो साता बजारमा रू. ११ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख १५ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यो रकम गत साताको कारोबारमा रू. १२ अर्ब १५ करोड ४३ लाख ३७ हजार थियो । गत साताभन्दा यो साता रू. ७३ करोड ४७ लाख २२ हजार कम रकमको कारोबार भएको हो ।
यो साता पहिलो कारोबार दिन रू. ३ अर्ब १३ करोड ८२ लाख ४३ हजार बराबरको उच्च रकमको कारोबार भएको थियो । अन्तिम कारोबार दिन पनि रू. २ अर्ब ८० करोड ७७ लाख ८ हजार बराबरको कारोबार भएको छ । बजार घटेको तीन दिन भने करीब रू.२ अर्बको हाराहारीमा शेयर कारोबार भएको छ ।
कारोबार रकममा कमि आएको यो साता कारोबार शेयर कित्ता भने १ करोड १७ लाख ४५ हजार कित्ता बढी कारोबार भएको छ । गत साता ४ करोड ४ लाख ७९ हजार कित्ता शेयर कारोबार भएकोमा यो साता ५ करोड २२ लाख २५ हजार कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
लगानीकर्ताहरुको सम्पत्ति पनि यो साता रू. १३ अर्ब २ करोड १० लाखले वृद्धि भएको छ । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन रू. २० खर्ब ८० अर्ब १२ करोड ८० लाख रहेको कुल बजार पूँजीकरण रकम यो साताको अन्तिम कारोबार दिन रू. २० खर्ब ९३ अर्ब १४ करोड ९० लाख पुगेको हो ।
यो साता सर्वाधिक कारोबार गर्ने १० ओटा कम्पनीहरुमध्ये धेरै जसो जलविद्युत् कम्पनी रहेका छन् । पहिलो नम्बरमा भने सोल्टी होटलकोे सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको छ ।
उक्त कम्पनीको यो साता रू. ५० करोड २० लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यो साता पाँच ओटा जलविद्युत् कम्पनीहरु नेशनल हाइड्रोपावर, अपि पावर, अरुणभ्याली हाइड्रो, अरुण कावेली पावर र हिमाल दोलखा हाइड्रो सर्वाधिक कारोबार गर्ने १० ओटा कम्पनीभित्र परेका छन् ।
पाँच ओटा जलविद्युत् कम्पनीहरुमध्ये हिमाल दोलखाको सर्वाधिक रकम रू. ४७ करोड २० लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यो साता कुमारी बैंक, नेपाल बैक, शिखर इन्स्योरेन्स र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी पनि सर्वाधिक कारोबार गर्ने १० ओटा कम्पनीभित्र परेका छन् ।
सर्वाधिक बजार पूँजीकरण भएका १० ओटा कम्पनीहरु :
यस साता पनि सर्वाधिक बजार पूँजीकरण हुने कम्पनीको पहिलो स्थान नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीलेनै लिएको छ । उक्त कम्पनीको शेयरको कुल मूल्य अर्थात् कुल बजार पूँजीकरण रकम यो साताको अन्तिम कारोबार दिनसम्म रू. १ खर्ब ५ अर्ब १५ करोड रहेको छ ।
गत साताको तुलनामा भने उक्त कम्पनीको कुल बजार पूँजीकरण रकममा कमि आएको हो । गत साताको अन्तिम कारोबार दिनसम्म कम्पनीको कुल बजार पूँजीकरण रकम रू. १ खर्ब ६ अर्ब ५० करोड रहेको थियो ।
सर्वाधिक कुल बजार पूँजीकरणको दोस्रा स्थानमा रहेको नबिल बैंकको कुल बजार पूँजीकरण रकम पनि गत साताभन्दा यो साता कम भएको छ । गत साता रू. ८८ अर्ब २४ करोड ७० लाख रहेको उक्त कम्पनीको कुल बजार पूँजीकरण यो साता रू. ८७ अर्ब ४४ करोडमा झरेको छ ।